Ukuhlonipha kwesoka noma komkhwenyana ekhweni – The Ulwazi Programme
Ukuhlonipha kwesoka noma komkhwenyana ekhweni
Isizwe samaZulu siyakwazisa ukuhlonipha kakhulu. Izindlela zokuhlonipha zigqugquzelwa ngezindlela ezahlukene ukukhombisa ukubaluleka kwesiko lesiZulu. Izindlela zokuhlonipha ziningi, lapha sizobheka indlela insizwa noma isoka elihlonipha ngayo ekhweni lapho iqonywe khona. Kubalulekile ukuthi intombi uma seyazi ukuthi kukhona lapho esithanda khona yazise udadewabo noma iqhikiza ngokuthi isiqomile. Lokhu kuyasiza nangokuthi izintombi phela zingathathelani amasoka.
Ngokwesintu lesintu isoka akufanele liye ekhweni kodwa lomkhuba kuyenzeka kwezinye izindawo. Ziningi izinto ezilandelwayo uma kufanele kuvakashe isoka kubakantombazane. Ukwaziwa kokuqoma kwentombi kubo noma endaweni kusiza nangokuthi iyaqala igqugquzelwe ngokuthi ibe nezinto zayo zokwakha umuzi njengezingubo zokulala, izitsha njalonjalo. Isoka akufanele lifike emini kubona noma ngabe ubani kubokantombi. Umuzi wendoda uyahlonishwa kakhulu noma ngabe akasekho umnumzane wekhaya lenhlonipho iyaqhubeka noma ngabe kukhona abafana okungabafowabo wentombi. Uma ngabe bebevumelene ngokuvakashelana bayatshelana ukuthi omunye uzokwazi kanjani ukuthi selifikile isoka. Izindlela ababezisebenzisa ukushaya ikhwela noma
baphathe amathoshi bawakhanyise noma bawacishe. Lowo olindele uzobese eyabona ukuthi usefikile lowo amlindile aphume ngesinyenyela amlande amfake elawini lamantombazane. Kufanele isoka lihambe kusempondo zankomo angabonwa muntu ekhaya.
Uma isoka lisuka endaweni ekude lingeke likwazi ukufika ebusuku ekhweni, lalifika emini kodwa lingangeni kubokantombazane. Kwezinye izindawo lingenisa emzini obude buduze bese kuthunyelwa ingane ukuthi iyomcelela intombi leyo. Intombazane ngalesosikhathi izokwazisa odadewabo ukuthi abamphelezele, uma ingenabo izocela izintombi zendawo ezimbalwa ukuthi zimphezele. Intombi kwakungafanele ivele izihambele yodwa kubona noma ubani ukuthi iya esokeni. Benze amalungiselelo okuthi
bazobonana ngasikhathisini. Intombi ibuyele ekhaya nezinye iqale ilungiselele isoka layo ngokufihla kungaboni abazali. Uma lingakwazanga ukuhamba ekuseni kakhulu indlu noma ilawu lelo elele kulo isoka liyavalwa umnyango uvulwe kancane. Lokhu kwakuyindlela yokukhombisa ukuthi kukhona umuntu endlini. Ngalokhu kuvakashelana akushiwo ukuthi sebenikiwe ilungelo lokuthi balalane, isiko lokusoma laliqhubeka kuze kube usuku lomgcagco. Kwezinye izindawo akuvumelekile nokuthi balale embhedeni owodwa noma ngabe sebelobolene.
Nendlela yokugqoka iyingxenye yokuhlonipha. Isoka noma umkhwenyana uma eya ekhweni akufanele agqoke ingubo eveza imikhono
noma isingenhla, kufanele agqoke ahlonipheke afake ibhantshi. Kuthiwa lokhu kwakwenzelwa nokuthi angavezeli abantu angaqondene nabo umzimba njengodadewabo kamakoti ngoba abanye abantu bangasukwa umona. Lokhu ukwenza noma ngabe useganiwe ahloniphe ekhweni lakhe. Esikhathini sanamuhla abanye balinikezwa ngamalunga omndeni noma abasekhweni ilungelo lokuthi bangalifaki ibhantshi ngaphandle uma kukhona imicimbi emikhulu ekhaya kuzohlanganisa yonke imindeni. Isoka noma umkhwenyana akavumelekile ukuthi adle noma yini ekhweni uma engakahlatshelwa imbuzi eyaziwa ngokuthi yindlakudla.
Categories Culture Tags Amasiko esintu, Ekhaya, Home, marriage, Umshado